About us - TaiZhou Huaren agesi Zikagesi Co., LTD
I-TaiZhou Huaren Electrical Appliance Co., LTD yasungulwa ngoSepthemba ka-2000, kwenziwa amafeni kagesi anokwethenjelwa futhi ahlala isikhathi eside, ifeni elincane eliphakeme, ifenisha yetafula lokunamathisela, umlandeli wophahla, abalandeli be-DC njalonjalo. Inkampani inamalungelo obunikazi bemodeli amabili , amalungelo obunikazi wokuklama kanye no-5Kunamamodeli angaphezu kwangu-30 ongawakhetha.
Sisebenza ngokukhethekile kubalandeli bakagesi. Ngokusekelwa kwemishini yokwenziwa esezingeni eliphakeme kanye nendlela yokuhlola eyinkimbinkimbi, .Inkampani idlule i-CE, i-ROHS, i-CB, isitifiketi se-3c, Inhloso yethu ukukhiqiza ngokuphathwa okuqinile, ukusinda ngekhwalithi ephezulu nokukhazimula ngensizakalo ethembekile.
I-Zhejiang Huaren Technology Co., Ltd. ingumhlinzeki owaziwayo we-electricl plastic fan onamandla we-R & D kanye ne-manufact.Huaren motor egxile ku-fan yeplastic ye-electricl nama-Motors, ama-Motors ahambisanayo nezinhlobo ezahlukahlukene zama-motors;
Ukunamathela kusiko lebhizinisi "Ubuqotho, Ukusebenziseka, Ukuvumelana, Ukuqamba" .Umkhiqizo usetshenziswa kabanzi embonini yezimoto, i-Industrial Industry, Health & Fitness, njll., Ikakhulukazi ezintweni zasekhaya.I-Headquarter iseTaizhou, China,? The inkampani isebenzisa ukuphathwa kweqembu futhi isibe ukuphathwa kolwazi, ukukhiqizwa kobuhlakani kanye nocwaningo nentuthuko projectization, ikhwalithi yokumiswa kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke ngokuthuthuka okuqhubekayo?? ULeili ube ngumhlinzeki wesixazululo se-electricl plastic fan solution ngokuncintisana okunamandla okuphelele.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko nokugcina ukukhula okuhle kwezomnotho, ukuthengisa kweqembu kweqe ama-yuan ayizigidi ezingamashumi amahlanu ngo-2017, nezimpahla eziphelele ezingama-yuan ayikhulu. Ngokubambisana namakhasimende amaningi avelele? Ku-globle, uHuaren usephenduke isu elithembekile uphawu lomlingani.
Le nkampani iyaqhubeka nokusizakala ngocwaningo lobuchwepheshe nentuthuko nezingxenye zokukhiqiza ukuhlinzeka amakhasimende ngezinhlobo ezahlukahlukene zekhwalithi ephezulu, engabizi kagesi yemikhiqizo yeplastiki kanye nezixazululo ezihlobene. Esikhathini esizayo, uHuaren uzohlinzeka amakhasimende ngokunotha nangokwezifiso ezingaphezulu imikhiqizo ngokuqhubeka kokutshalwa kwezimali okusha kanye nokuhlanganiswa kwezinsizakusebenza ukufeza ukusizakala nokuwina.